Middle soft jụrụ oyi Manufacturers & Suppliers - China Middle soft oyi Factory
Akwụkwọ Asambodo & Ule
Ihe omuma nke teknụzụ
Obere Soft oyi akpa
Middle Soft oyi
Nnukwu Agwọ Nro Nro
Nnukwu eriri mmiri na-emepe emepe
Obere Imepe Mmiri
Akpa Mmiri Akpa
Akpa na akpa mmiri
Akpa mmiri mmiri mmiri
Akpa mmiri na-enweghị mmiri
Waterproof Camping azu paaki
Azu Ochie & Ngwá Ọrụ Box
Plain Fishing Lure Box
Printing Flexo Box
Hydration eriri afo akpa
Egwuregwu Mmiri Egwuregwu
Usoro ndị agha
Video ụlọ ọrụ
Obere akpa oyi akpa
Akpa azu paaki ngwa nro
Nnukwu eriri afọ imeghe
Obere oghere eriri afo
Obere akpa mmiri
Waterproof akpa & azu paaki
Akpa mmiri mmiri na-enweghị mmiri
Akpa mmiri na-ekpuchi mmiri
Waterproof maa ụlọikwuu azu paaki
Mpempe ihe na-adọrọ adọrọ ịkụ azụ
Printing akpụ akpụ igbe
Akpa akpa ume hydration
Buckle Mountaineering Bag Travel Bag
Soft oyi N'èzí Hiking Maa ụlọikwuu
Maa ụlọikwuu Ice oyi Waterproof
Portable Ice oyi TPU N'èzí
Waterproof paaki oyi akpa
Military ozuzo Waterproof Soft oyi
Military quality ozuzo n'èzí multifunctional ice mkpọ. Ike buru ibu nke 26 mkpọ. 900D-TPU ihe di elu. A dịgasị iche iche nke ebu ụzọ. Mgbapu mmiri na nke na-ekpo ọkụ, nkecha na obere, dabara maka ndapụta dị iche iche. Maa ụlọikwuu, picnic, Anụ Mmịkpọ, ụgbọ ala, wdg, na iche iche na ọrụ.
Oyi akpa waterproof soft soft oyi
Ihe siri ike, nke na-enweghị mmiri, akwụkwọ mkpuchi na ịdị mfe iburu bụ njirimara ya. Ọ nwere ike izute mkpa nke ebu ngwa nju oyi. Oghere dị obosara dị mma maka iri nri, yana arụmọrụ nchekwa ọkụ dị elu nwere ike ime ka nri ahụ dị ọhụrụ maka ihe dịka awa 72.
High Quality Soft Waterproof oyi akpa
N'èzí waterproof ice mkpọ. Ihe na-egbochi mmiri nke 840D-TPU, ikike dị oke ala nke 30 mkpọ, na ahụ na-eguzogide isi awọ. Kwe ka ice BD-001-36 bụrụ ezigbo enyi gị kwesịrị ntụkwasị obi maka ijegharị, ijegharị na ịma ụlọikwuu
Obere obere akpa oyi oyi nwere ike ijiri mmiri na-enweghị mmiri, ihe 840D-TPU, iko 20 nke ikike, iji tinye ezigbo nri, ihe ọveraụveraụ, mkpụrụ osisi ịchọrọ, ma nwee ọ Bụ BD-001-41 maka gị na ọkụ n'èzí Ihe ụtọ dị na ya na-eweta.
N'èzí Waterproof Portable ozuzo oyi Bag
Akpa ice ejiji nwere ọdịdị ozuzo, mana nwekwara ogo ndị agha. Jiri 900D-TPU akwa-arụmọrụ waterproof ihe onwunwe, na roba ezé zipa na magburu onwe waterproof arụmọrụ. Tanklọ dị n’ime ya nwekwara ike ịbụ nke mmiri na-adịghị.
N'èzí Waterproof Food oyi
Akwa-mma 900D-TPU ihe onwunwe, agafeghị oke ike nke 24 Mkpọ. Inogide, waterproof, na obere bụ niile atụmatụ. Ọ nwere ike izute mkpa nke ndị na-ajụ oyi n'èzí. Oghere dị obosara dị mma maka iri nri, yana arụmọrụ nchekwa ọkụ dị elu nwere ike ime ka nri ahụ dị ọhụrụ maka ihe dịka awa 72. Kwe ka ị rie nri ọhụrụ na oyi n’èzí.
N'èzí Waterproof Beverage oyi
N'èzí picnic na-a drinkụ ice mkpọ. Nnukwu ikike 26 mkpọ. 840D-TPU ihe di elu. -Zọ ejiri aka, otu ubu. Mgbapu mmiri na ikpo ọkụ, nkecha ma sie ike, dabara maka oge dị iche iche, ịma ụlọikwuu, picnic, anụ oriri, ụgbọ ala, wdg.
Plastic Ezé mkpọchi uwe Waterproof oyi Bag
20 Mkpọ nke obere TPU soft oyi akpa, na-eji elu-edu roba ezé mkpọchi uwe, elu-ọkwa waterproof, nri ichebe ruo 72 awa. Enwere ike iji ya buru nri mmiri, mkpụrụ osisi, ihe ọveraụveraụ na ọgwụ. Mee nnukwu ọrụ na picnics, hiking, maa ụlọikwuu na ihe omume ndị ọzọ.
Gwara mmanụ Bag Soft gwara mmanụ
Elu-edu 840TPU ihe onwunwe, agafeghị oke ike, adabara dị iche iche n'oge. Ma ị na-picnic, maa ụlọikwuu ma ọ bụ dị Anụ Mmịkpọ na backyard, ị ga-mkpa ndị dị otú ahụ a adaba na bara uru oyi ngwa akpa.
Sibo akpa & Suitcases Fitings Co., Ltd. Jiniang